သံမဏိ et al အပေါ်ဆရာယောဟနျအေဂျွန်ဆင်, 2013 (နှင့်ဂျွန်ဆင် PT ဆောင်းပါးအောက်မှာမှတ်ချက်တွေအပိုင်းများတွင်နီကိုးလ် Prause ဆွေးနွေး) - ။ Porn တွင်သင့်ဦးနှောက်
သံမဏိ et al အပေါ်ဆရာယောဟနျအေဂျွန်ဆင်။ , 2013 (နှင့်ဂျွန်ဆင် PT ဆောင်းပါးအောက်မှာမှတ်ချက်တွေအပိုင်းများတွင်နီကိုးလ် Prause ဆွေးနွေး)
Steele et al ။ , 2013 ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ နီကိုးလ် Prause သူတို့၏ဇူလိုင်လတွင် 2013 EEG လေ့လာမှုနှင့် ပတ်သတ်၍ လူအများစုက၎င်းတို့၏ညစ်ညမ်းညစ်ညမ်းမှုကိုတားဆီးရန်အခက်အခဲရှိကြောင်းဝေဖန်မှုများကိုပြုလုပ်ခဲ့သည်။ အောက်မှာမှတ်ချက်ပေး စိတ်ပညာယနေ့တွင် အင်တာဗျူး နီကိုးလ် Prause, အကြီးတန်းစိတ်ပညာ၏ ပါမောက္ခဂုဏ်ထူးဆောင်ယောဟနျသအေဂျွန်ဆင် said:
ကတင်ပြ ယောဟနျသအေဂျွန်ဆင် Ph.D ဘွဲ့ကို on ဇူလိုင်လ 19, 2013 - ညနေ ၂:၃၅
ဒီတော့ဒုက္ခအွန်လိုင်း erotica ၎င်းတို့၏ကြည့်ထိန်းညှိရှိခြင်းသတင်းပေးပို့သူကိုဤအုပ်စုဓါတ်ပုံတွေကိုတခြားမျိုးထက်ခေါ်ဆောင်သွားဓါတ်ပုံတွေကိုတစ်ဦးပိုမိုအားကောင်း EEG တုံ့ပြန်မှုရှိပါတယ်။ ရွေးချယ်မှုကသူတို့မူးယစ်ဆေးနှင့်အတူတင်ပြသည့်အခါစွဲနေတဲ့အလားတူခိုင်မာတဲ့ EEG တုံ့ပြန်မှုကိုပြသပါသလား ကျနော်တို့မသိရပါဘူး။ ပုံမှန်မဟုတ်သောစွဲ erotica ဖို့ပူပအုပ်စုတစ်စုအဖြစ်ခိုင်မာတဲ့တစ်တုံ့ပြန်မှုကိုပြသပါသလား တနည်းကား, ကျနော်တို့မသိရပါဘူး။ ငါတို့သည်ဤ EEG ပုံစံစွဲသို့မဟုတ် Non-စွဲ၏ဦးနှောက်ပုံစံများပိုမိုဆင်တူသည်ရှိမရှိမသိရပါဘူး။
Prause သုတေသနအဖွဲ့သည်သူတို့၏ဘာသာရပ်များအား erotica သို့မြင့်မားသော EEG တုံ့ပြန်မှုသည်စွဲလမ်းစေသည့် ဦး နှောက်တုန့်ပြန်မှုလားသို့မဟုတ်မြင့်မားသော libido ဦး နှောက်တုန့်ပြန်မှုဟုတ်မဟုတ်ကိုသရုပ်ပြနိုင်လိမ့်မည်ဟုပြောဆိုထားသည်။ သို့သော် EEG တုံ့ပြန်မှုတွင်ကွဲပြားခြားနားမှုများကိုရှင်းပြခြင်းသည်အုပ်စုတစ်ခုလုံး၏တုံ့ပြန်မှုသည်စွဲလမ်းနေပုံရှိ၊ မရှိဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်ကွဲပြားခြားနားသောမေးခွန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ Prause အဖွဲ့က EEG တုံ့ပြန်မှုနှင့်အတူကိန်းဂဏန်းအရသိသာထင်ရှားသောဆက်စပ်မှုမှာအဖော်အဖက်နှင့်လိင်ဆက်ဆံလိုသောအနုတ်လက္ခဏာဆက်နွယ်မှုဖြစ်သည် (r = - ၃၃) ဖြစ်သည်။ တစ်နည်းဆိုရသော် EEG တုန့်ပြန်မှုပြင်းထန်သောဘာသာရပ်များသည်လိင်တူဆက်ဆံသူနှင့်လိင်ဆက်ဆံလိုစိတ်နည်းသွားခြင်းအတွက်အနည်းငယ်စိတ်သဘောထားရှိကြသည်။ ယင်းသည် erotica အားကြည့်ရှုခြင်းအားပြtroubleနာရှိသည့်လူများ၏ ဦး နှောက်၏တုံ့ပြန်မှုသည်မြင့်မားသောလိင်စိတ်နှင့်စွဲလမ်းသူများသို့မဟုတ်စွဲလမ်းသူများနှင့်ဆင်တူခြင်းရှိမရှိနှင့် ပတ်သက်၍ မည်သို့ဆိုသနည်း။
နှစ်လအကြာဂျွန်ဆင်ကဒီပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခဲ့သည် စိတ်ပညာယနေ့တွင် သူ Prause ရဲ့အင်တာဗျူးအောက်မှာတင်ထားတဲ့ဘလော့ဂ်ပို့စ်။
ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင် Prause ရဲ့ကြိုတင်အမြင်များရလဒ်ဆန့်ကျင်ဘက်နိဂုံးချုပ်ဖို့ ဦး ဆောင်ခဲ့သည်
ကတင်ပြ ယောဟနျသအေဂျွန်ဆင် Ph.D ဘွဲ့ကို on စက်တင်ဘာလ 22, 2013 - ညနေ ၂:၃၅
Prause မှကျွန်ုပ်စိတ်ထဲတွင်မြုပ်နေဆဲဖြစ်သည်။ သူမသည်သူမဘာသာရပ်များ၏ ဦး နှောက်သည်မူးယစ်ဆေးစွဲသူများ၏ ဦး နှောက်သည်သူတို့၏မူးယစ်ဆေးဝါးကိုတုန့်ပြန်သကဲ့သို့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပုံရိပ်များကိုတုန့်ပြန်မှုမပြုခဲ့ဟုသူမကလိင်မှုဆိုင်ရာရုပ်ပုံများအတွက် P300 ဖတ်ခြင်းပိုမိုမြင့်မားကြောင်းအစီရင်ခံခဲ့သည်။ P300 spikes များကိုပြသသောဆေးစွဲသူများကဲ့သို့ပင်သူတို့ရွေးချယ်သောဆေးနှင့်ပြသသောအခါ။
အမှန်တကယ်ရလဒ်များ၏ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်သောကောက်ချက်ကိုသူမည်သို့ကောက်ယူနိုင်မည်နည်း။ သူမသည်သူမရှာတွေ့လိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ထားသည့်သူမ၏ကြိုတင်အမြင်များကိုပြုလုပ်နိုင်လိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်ပါသည်။ ငါတခြားနေရာဒီအကြောင်းရေးသားခဲ့သည်။
ဂျွန်ဆင် စိတ်ပညာယနေ့တွင် post: လိင်စွဲလမ်းအကြောင်းကိုစေတယ်မေလအရောင်နိဂုံး. Key ကိုယူ-ကွာ: Johnson က Prause ရဲ့နောက်ကွယ်မှာအပြုအမူတွေ၊ တရား ၀ င်ခြိမ်းခြောက်မှုတွေ (သူမနဲ့ Wilson ကိုပြုခဲ့သလိုမျိုး) နဲ့ဘက်ထရီတွေအကြောင်းဖော်ပြခဲ့သည်။ စိတ်ပညာယနေ့တွင် အယ်ဒီတာများသည်ခြိမ်းခြောက်မှုများနှင့်အတူ Prause ၏အထောက်အပံ့မပေးထားသောပြောဆိုချက်များကိုဝေဖန်သောဘလော့ဂ်ပို့စ်နှစ်ခုအားဖယ်ရှားပစ်ရန်ဖိအားပေးခဲ့သည်။ ဂယ်ရီ Wilson ၏ဝေဖန်မှုသံမဏိ et တစ်ဦးl ။ , 2013″,2- Robert Weiss၊ LCSW & Stefanie Carnes PhD တို့၏ဝေဖန်မှု) ။ သူလည်း Prause ကနေစိတ်ပျက်စရာများနှင့်ခြိမ်းခြောက်အီးမေးလ်များကိုလက်ခံရရှိဖော်ပြထားတယ်:
ကျွန်မပထမဦးဆုံးဤ blog post ကိုပဋိသန္ဓေနှင့်တစ်လအကြာအကြောင်းကိုက compose မှစတင်ခဲ့သည့်အခါ, ငါ၏မူရင်းရည်ရွယ်ချက်ကိုလက်ရာမြောက်သောအသေးစိတ်အတွက်ငါအမှန်တကယ်ဒေတာကျော်လွန်ပြီးသူတို့၏ဆင်ခြေပုံကြီးချဲ့သို့မဟုတ် overextending သည့်ဆွေးနွေးငြင်းခုံ၏ဆန့်ကျင်ဘက်နှစ်ဖက်၏အကြံပြုချက်ကိုထောက်ခံအားပေးသူများမြင်သောအတွက်တိကျသောနည်းလမ်းများကိုဖော်ပြရန်ခဲ့သည် လေ့လာမှုမှာ။ ငါစကားစစ်ထိုးပွဲသင်တန်းသားများအကြားပေါက်ကွဲစိတ်ခံစားမှု-တရားစွဲဆိုအပြောအဆိုတစ်ခု firestorm လေ့လာတွေ့ရှိသောအခါငါနောက်ပိုင်းတွင်ကြှနျုပျ၏စိတျနှလုံးပြောင်းလဲသွားတယ်။ မဒေတာယုတ္တိနည်းအဓိပ်ပာအဘယ်သို့သောအကြောင်းငြင်းခုံ, ဒါပေမယ့်ဥပဒေရေးရာလုပ်ဆောင်ချက်ခြိမ်းခြောက်မှုများအပါအဝင်ကြော်ငြာ hominem ခြိမ်းခြောက်မှုများ။ ငါပါတီများထဲကတစ်ခုချယူလိမ့်တောင်းဆိုပုံကြောင့်၎င်း, တစ်ဦး PT blog post: ပျောက်ကွယ်သွားကိုမြင်တော်မူ၏။ အဆိုပါပါတီများ၏တဦးတည်းငါသိပ္ပံနည်းကျဖိုရမ်အတွက်ဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုအတွက်သုတေသနလုပ်ငန်းများလျော်သောအနက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့မေးခွန်းတွေကြီးပြင်းခဲ့ကွောငျးကြားသိသောကြောင့်ငါပင်အမျက်ထွက်အီးမေးလ်များ၏စုံတွဲတစ်တွဲကိုယ့်ကိုယ်ကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။
ဒီတော့ကျွန်မအခန်းထဲမှာထဲကတိတ်တဆိတ်အစွန်အဖျား-toe ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြပြီ။ ငါသည်လည်းရိုးရှင်းစွာ t ကို, ရှေ့ဆက်သွားနှင့်ငါပြီးသားတစ်လအကြာရေးစပ်ခဲ့ရာကဒီမှာ post ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြo သိပ္ပံတစ်ဦးသက်သက်သာရည်မှန်းချက်လုပ်ငန်းမရှိ, အမှန်တကယ်သိပ္ပံပညာရှင်များအလွန်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရနှင့်စိတ်လှုပ်ရှားမှုကသူတို့အလုပ်အတွက်ပါဝင်ပတ်သက်ဖွစျလာနိုငျကွောငျး, ငါ့ပင်ကိုယ်မူလအရေးဆိုမှု၏ဥပမာတစ်ခုတင်ပြ။ ဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုအတွက်အငြင်းပွားဖွယ်ရာလည်းတစ်ခုအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ဥပမာဖြစ်ပါတယ် ပျော့-သိပ္ပံရလဒ်များကိုအထင်ကြီးဖို့အမေရိကန်သုတေသီများအကြားဘုံလမ်းကြောင်းသစ်.
ဤသည်ဂျွန်ဆင်နှင့်အတူ (အတုအမည်များကို အသုံးပြု. ) စောဒကတက်တဲ့သူ Prause ဒေါသထွက် မိမိအများ၏ထင်မြင်ချက်အပိုင်းတွင် စိတ်ပညာယနေ့တွင် Prause ရဲ့ 2013 EEG လေ့လာမှုအကြောင်း blog post (ဂျွန်ဆင်သည်လိင်စွဲလမ်းမှုနှင့် ပတ်သက်၍ ထင်မြင်ချက်လုံးဝမရှိကြောင်းသတိပြုပါ) ။ “ အမည်မသိ” သည်နီကိုးလ်ပရာယပ်စ်ဖြစ်ကြောင်းသေချာသည်; ဖြစ်ကောင်း Jen H ကိုလွန်းသည်။
PRAUSE & Johnson“ ဆွေးနွေးငြင်းခုံခြင်း”
Jen အပေါ်အားဖြင့် Submitted စက်တင်ဘာလ 21, 2013 - ညနေ ၂:၃၅
ငါအရမ်းဤအလှည့်ပတ် toeing အစွန်အဖျား, အဟမ်းအများစုအသည်းအသန်, လိင်စွဲစွဲခဲ့ကြပြီ။
Jen အိပ်ချ်, CSW
သင့်ရဲ့မှတ်ချက်ပေးရန်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်, Jen ။
ဒါဟာစိတ်အားထက်သန်နေတဲ့ကို double-သန်သည်ငါ့အဖို့ပုံရသည်။ ကောင်းမွန်သောအခြမ်းတွင်တစ်ဦးဘာသာရပ်များအတွက်စိတ်အားထက်သန်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးကြောင့်ဘာသာရပ်အပေါ်အချိန်နှင့်စွမ်းအင်တွေအများကြီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်ဆန္ဒရှိပါကြောင်းဆိုလိုသည်။ သူသို့မဟုတ်သူမကတစ်စိတ်အားထက်သန်ခဲ့မဟုတ်လျှင်အဘယ်ကြောင့်တစ်စုံတစ်ဦးကတစ်စုံတစ်ခုကိုလေ့လာမလဲ
အဆိုပါအသည်းအသန်လူတစ်ပြီးသားသူ / သူမ၏စိတ်ကိုဖွင့်လုပ်ထားပြီးလျှင်အခြားတစ်ဖက်တွင်, ထိုအသည်းအသန်စွမ်းအင်အားလုံးညာဘက်သို့မဟုတ်မှားယွင်းတဲ့တဦးတည်းဖြစ်နိုင်ချေ, ဆီသို့သွားဖို့မယ်။ အခါကမှား, စိတ်အားထက်သန်မှနျတရားကိုမျက်စိကွယ်စေပါတယ်။
အမည်မသိအပေါ်အားဖြင့် Submitted နိုဝင်ဘာလ 2, 2013 - ညနေ ၂:၃၅
သငျသညျဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း, ဒီဆွေးနွေးငြင်းခုံအစီအစဉ်များနှင့်အတူများစွာသောကတည်းက။ သို့သော်သိပ္ပံပညာဆိုင်ရာဆွေးနွေးငြင်းခုံမှုများကိုစာအုပ်ရောင်းရန်ကြိုးစားသည့်ကျပန်းလူနှင့်ချိတ်ဆက်ထားခြင်းလား။ ဒါဘယ်လိုတိုးတက်မှုလဲ။ ငါသည်လည်းသင်လေ့လာမှု၏အချက်ကိုလွဲချော်ထင် ... လူအပေါင်းတို့ပုံစံကိုပြသ။ ဤအုပ်စု (၁) သည်အခြားသူအားလုံးနှင့်တူသည် (၂) သေချာသည်မှာ ဦး နှောက်တိုင်းတာမှုသည်မည်သည့်အတိုင်းအတာအထိမဆိုလိင်ဆက်ဆံခြင်းနှင့်ဆက်စပ်မှုမရှိပါ။ စာရေးဆရာများသည်အတိုင်းအတာတစ်ခုလုံးကိုစီမံခန့်ခွဲပြီး၎င်းသည်အဘယ်ကြောင့်ဖြစ်နိုင်ကြောင်းပြောဆိုသော်လည်း၎င်းသည်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေသည့်အလိုဆန္ဒနှင့်မသက်ဆိုင်သည့်အကြောင်းရင်းကိုကျွန်ုပ်မသေချာပါ။
ကတင်ပြ ယောဟနျသအေဂျွန်ဆင် Ph.D ဘွဲ့ကို on နိုဝင်ဘာလ 2, 2013 - ညနေ ၂:၃၅
အကယ်၍ လေ့လာမှု၏အဓိကအချက်မှာ“ လူအားလုံး” (လိင်စွဲလမ်းသူများသာမဟုတ်ပါ) သည်လိင်ဆိုင်ရာရုပ်ပုံများကိုကြည့်ရှုစဉ် P300 လွှဲခွင်တွင်မြင့်တက်လာကြောင်းပြသပါကသင်မှန်ကန်သည်၊ ကျွန်ုပ်ဆိုလိုသည်မဟုတ်၊ စွဲ။ အကယ်၍ လေ့လာမှု * သည်စွဲလမ်းမှုမရှိသောနှိုင်းယှဉ်သောအဖွဲ့ကိုအသုံးပြုပြီး၎င်းတို့သည် P300 ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းတွေ့ရှိပါကသုတေသီများအနေဖြင့်လိင်စွဲလမ်းသူများ၏ ဦး နှောက်သည်စွဲလမ်းသူမဟုတ်သူများနှင့်ထပ်တူပြုသည်ဟုဆိုလိမ့်မည် ဒီတော့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးစွဲလမ်းစွဲစွဲလမ်းသူနှင့်စွဲလမ်းသူမစွဲသူများအကြားခြားနားချက်မရှိပါ။ အဲဒီအစား, လေ့လာမှုပြသူကိုယ်တိုင်ဖော်ပြစွဲသူများသည်ကိုကင်းနှင့်အတူတင်ပြသည့်အခါကိုကင်းစွဲစွဲလမ်းသူတစ် ဦး P300 ဆူးပြသကဲ့သို့သူတို့၏ Self- ဖော်ပြထားစွဲလမ်း "ပစ္စည်း" (လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရုပ်ပုံများ) ကိုတုံ့ပြန် P300 ဆူးပြသခဲ့သည်, အရက် P300 ဆူးပြသ အရက်နှင့်အတူတင်ပြခဲ့သည်, etc
P300 လွှဲခွင်နှင့်အခြားရမှတ်များအကြားဆက်နွယ်မှုကိုပြသသည့်အရာတစ်ခုတည်းသောသိသာထင်ရှားသောဆက်စပ်မှုသည်မိတ်ဖက်တစ် ဦး နှင့်လိင်ဆက်ဆံလိုသောဆန္ဒနှင့်ဆက်စပ်နေသည်။ တနည်းအားဖြင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပုံရိပ်ကို ဦး နှောက်ကတုန့်ပြန်လေလေ၊ ထိုသူ၏တကယ့်ပုဂ္ဂိုလ်နှင့်လိင်ဆက်ဆံလိုသောဆန္ဒသည်နည်းလေလေဖြစ်သည်။ ဤအရာသည်ကျွန်ုပ်အတွက်ပုံရိပ်များကိုအလွန်စွဲလန်းနေသောသူ / သူသည်အမှန်တကယ်ဘဝရှိလူများနှင့်လိင်ဆက်ဆံရန်အခက်အခဲရှိသည့်ပုံသဏ္likeာန်နှင့်တူသည်။ ဒီလူမှာပြproblemနာရှိတယ်လို့ငါပြောမယ် ဤပြproblemနာကို“ စွဲလမ်းမှု” ဟုကျွန်ုပ်တို့ခေါ်ချင်သည်ဖြစ်စေ၊ သို့သော်လည်းငါသည်ဤတွေ့ရှိချက်ဒီနမူနာထဲမှာစွဲ၏မရှိခြင်း * ပြသပုံကိုမမြင်မိပါဘူး။
ငါ့ပညာအတတ်, ငါ့ post ကိုစာအုပ်တွေရောင်းဖို့ကြိုးစားနေတဲ့ကျပန်း dude မှလင့်များဆံ့မခံခဲ့ပါဘူး။ အဆိုပါ Porn လေ့လာဝေဖန်မှုဆိုဒ်စကားစစ်ထိုးပွဲအတွက်စိတ်ဝင်စားတစ်ဦးချင်းစီ၏တစ်ဦးကိုအရေအတွက်အားဖြင့်ပံ့ပိုးမှုများကိုပါရှိသည်, ငါကုသိုလ်ယူရှိစေခြင်းငှါအရာအငြင်းပွားမှုများကိုမိမိတို့အဘို့တရားစီရင်တော်မူရန်စာဖတ်သူများဖိတ်ကြားခဲ့သည်။ ငါ site ပေါ်တွင်မည်သည့်စာအုပ်ကြော်ငြာသတိထားမိခဲ့ပါဘူး။
အမည်မသိအပေါ်အားဖြင့် Submitted နိုဝင်ဘာ ၃ ရက် ၂၀၁၃ ခုနှစ် 8: 37pm
အိုကေ၊ ငါအကောင်းမြင်ခံရလိမ့်မယ်၊ ဒီ PT ရေးသားသူကိုရောသုတေသနဆောင်းပါးရဲ့စာရေးသူတွေကိုလည်းရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိဘက်လိုက်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ငါထင်တယ်။ တစ်ချက်မှာတော့ကျွန်တော်ခန့်မှန်းတဲ့အပြောင်းအလဲ (လိင်မှုဆိုင်ရာဓာတ်ပုံများအပြောင်းအလဲအများဆုံးရှိခြင်း) အနည်းဆုံးဓာတ်ခွဲခန်း ၁၀၀ ကထိန်းချုပ်ထားပါတယ်။ အရမ်းတည်ငြိမ်တယ် ထို့အပြင်ထိန်းချုပ်မှုများသည်စိတ် ၀ င်စားမှုတည်ဆောက်ခြင်း၏အနိမ့် / ပျက်ကွက်သည့်အဆုံးတွင်ရှိသူများဖြစ်သည်။ ကောက်ယူသည့်ဆုတ်ယုတ်မှု (ဆက်စပ်မှုများမဟုတ်) ကိုအနိမ့်အမြင့်ကောင်းမွန်စွာကိုယ်စားပြုခြင်းမရှိခြင်းအတွက်ဝေဖန်နိုင်သည်၊ သို့သော်ဆောက်လုပ်ရေး၏အကွာအဝေးကိုကိုယ်စားပြုပုံရသည်။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ထိန်းချုပ်မှုကိုစုဆောင်းမခံခဲ့ရကြောင်းငါတို့မသိ။ သိပ္ပံပညာသည်နှေးကွေးသည်။ သိပ္ပံပညာရှင်ကိုဇီဝမုန်းတီးမှုနဲ့မနှင်ထုတ်ခင်မှာဖြစ်လာနိုင်တယ် (ဟက်တာ!)
1 ။ ဘယ်လိုကအခြားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာများနှင့်အတူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးကိုတုံ့ပြန်မလဲ
2 ။ အဘယ်အရာကိုပုံအမျိုးမျိုးနှင့်အတူပြောင်းလဲပစ်ကြမည်နည်း
3 ။ အဘယ်အရာကိုရုပ်ရှင်ကော?
ပိုကြီးတဲ့မေးခွန်းကတော့ ... ဘာကြောင့်ဒီလေ့လာမှုကိုပထမ ဦး ဆုံးလုပ်ဖို့ဒီလောက်ကြာတာလဲ။ တကယ်တော့လိုလားသူနှင့်လူအစုအဝေးနှစ်ခုလုံးသည်ဤဒေသရှိသိပ္ပံနည်းကျအဆင့်အတန်းကြောင့်အရှက်ရသင့်သည်။
သင်ပိုမိုကောင်းမွန်သောလင့်ခ်များလိုအပ်ပါကဤအကြောင်းအရာနှင့် ပတ်သက်၍ blogging အမှန်တကယ်သိပ္ပံပညာရှင်များရှိပါသည်။ ၎င်းသည်အထောက်အထားမရှိသောပုံနှင့်သူတို့၏ပြန်လည်သုံးသပ်မှုတွင်အမှားများစွာပြုလုပ်ခဲ့သည့်ဘလော့ဂါတ ဦး ဖြစ်သည်။ ငါတောင်မှမင်းကိုစွဲလိုလားသူသိပ္ပံလင့်များကိုငါပေးမည်။ PT ကဲ့သို့သော crappy ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းအပေါ်မှီခိုမဖြစ်သင့်။ PT ရေးသားသူသည်သိပ္ပံပညာရှင်မဟုတ်သောဘလော့ဂါမှသာစွဲလမ်းမှုအချိတ်အဆက်တစ်ခုကိုသာရွေးချယ်ခဲ့သည်ဟူသောဘက်လိုက်မှုအပေါ်ဝေဖန်သုံးသပ်ချက်ဖြစ်ရန်ရည်ရွယ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။
ကတင်ပြ ယောဟနျသအေဂျွန်ဆင် Ph.D ဘွဲ့ကို on နိုဝင်ဘာလ 3, 2013 - ညနေ ၂:၃၅
ငါသည်ဤအကြောင်းအရာအပေါ်ဘက်လိုက်မှုရှိစေခြင်းငှါ, ဒါပေမယ့်ငါကျင့်ကိုကျင့်လျှင်, ငါသည်ထိုသူတို့ကိုသတိထားမဟုတ်, ငါဆက်ဆက်ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိဆွေးနွေးငြင်းခုံတလမ်းတည်းဖြင့်သို့မဟုတ်အခြား skew ဖို့ကြိုးစားနေမဟုတ်ဘူး။ ဒီတော့သင်သည်ငါ၏စာအရေးအသားအတွက်မဆိုဘက်လိုက်မှုရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိမဟုတ်ကြောင်းယူဆပိုင်ခွင့်ရှိပါတယ်။ လေ့လာမှု၏စာရေးဆရာများရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိဘက်လိုက်ကြသည်ဖြစ်စေ, ငါမပြောနိုင်ပါဘူး။ ငါသူတို့စွပ်စွဲလိင်စွဲများ၏အာရုံကြောတုံ့ပြန်မှုလိင်စွဲလမ်း၏အယူအဆစီရင်ချက်ကိုပယ်နိုင်ရန်အတွက် Non-စွဲ၏တုံ့ပြန်မှုကနေချွတ်စွပ်အရွယ်အစားဖြစ်ကြောင်းသရုပ်ပြဖို့သူတို့ရဲ့လေ့လာမှုစေချင်ကြောင်းသံသယကြဘူး။ သူတို့ကဆက်ဆက်သူတို့ရဲ့လေ့လာမှုလိင်စွဲလမ်း၏အယူအဆအပေါ်သင်္ချိုင်းတွင်းကိုသံသယန့်ပစ်သောပေါ်ပြူလာမီဒီယာအစီရင်ခံရန်ဆန္ဒရှိခဲ့ကြသည်။ သို့သော်အုပ်စုနှစ်စုအကြားအာရုံကြောတုံ့ပြန်မှုချွတ်စွပ်အရွယ်အစားဖြစ်ကြောင်းပြသနိုင်ဖို့ Non-စွဲနေတဲ့ထိန်းချုပ်မှုအုပ်စုတစ်စုမပါဘဲသင်တန်း၏, လိင်စွဲလမ်း၏အယူအဆ discrediting ၏ပြောဆိုချက်ကိုအချိန်မတန်ဖြစ်ပါတယ်။
သင်ထိန်းချုပ်မှုအုပ်စုတစ်စုကို run ခဲ့လျှင်ငါတို့မသိကြဟုဆိုသည်။ သိပ္ပံနည်းကျဖိုရမ်တစ်ခုတွင်ဤမေးခွန်းကိုဖြေဆိုရာတွင်သုတေသီများတွင်၎င်းတို့တွင်ထိန်းချုပ်မှုအဖွဲ့မရှိကြောင်း၊ မည်သူတစ် ဦး တစ်ယောက်မျှမလိုအပ်သောကြောင့်၊ သူတို့၏ဘာသာရပ်များသည်သူတို့၏အတွင်းပိုင်းဘာသာရပ်များဒီဇိုင်းတွင်သူတို့၏ကိုယ်ပိုင်ထိန်းချုပ်မှုအဖြစ်အမှုဆောင်ခဲ့သည်ဟုဆိုခဲ့သည်။ ငါအတွင်းပိုင်းဘာသာရပ်များဒီဇိုင်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်တစ်ခုတည်းသောနှိုင်းယှဉ်ဓာတ်ပုံရိုက်လှုံ့ဆော်မှု၏ကွဲပြားခြားနားသောအမျိုးအစားများကို P300 တုံ့ပြန်မှုကြောင့်ငါတုံ့ပြန်မှုနားမလည်နိုင်ကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဤသည်က P300 ဆူးသည်အခြားပုံရိပ်များထက်ပိုမိုမြင့်မားကြောင်း၊ သို့သော်နှိုင်းယှဉ်ပမာဏသည်သူကိုယ်တိုင်ဖော်ပြသောစွဲလမ်းသူများနှင့်မတူသည်ဖြစ်စေ၊ ကွဲပြားသည်ဖြစ်စေကျွန်ုပ်တို့မသိပါ။ ရာနှင့်ချီသောဓာတ်ခွဲခန်းများမှဤတွေ့ရှိချက်ကိုတွေ့ရှိပါကစာရေးသူမှနှိုင်းယှဉ်နိုင်သည်။ ဒါပေမဲ့သူတို့မလုပ်ခဲ့ကြဘူး။
သုတေသီသူတို့ရဲ့လေ့လာမှုမှာ Self-ဖော်ပြထားသည် non-စွဲထည့်သွင်းခဲ့သည်ဆိုပါကတစ်ဖက်နှင့်အတူလိင်များအတွက် P300 လွှဲခွင်နှင့်အလိုဆန္ဒအကြားကစာရင်းအင်းသိသာထင်ရှားသောနှုတ်လက္ခဏာဆောင်သောဆက်စပ်မှုသူတို့အစီရင်ခံတင်ပြသည့်ကိန်းထက်ပင်ပိုမိုအားကောင်းပါပြီနိုင်ဘူး။ သူတို့သည်တွေ့အဆိုပါဆက်စပ်မှုဖြစ်ကောင်း P300 လွှဲခွင်အတွက်ကြောင့်အကွာအဝေး၏ကန့်သတ်လျှော့ချခဲ့သည်။ ဒါကြောင့်သူတို့ကသူတို့ကိုယ်သူတို့ erotica ၎င်းတို့၏အွန်လိုင်းကြည့်ထိန်းညှိပြဿနာများကိုသတင်းပို့မပြုခဲ့သူတွေကိုထည့်သွင်းမယ့်ပိုပြီးကွဲပြားခြားနားနမူနာအပါအဝင်မဟုတ်က disservice ကိုပြု၏။
ငါစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုဆုတ်ယုတ်ခြင်းနှင့်ဆက်စပ်မှုကိုသုံးပါ။ လူတစ် ဦး သည်ရိုးရှင်းသော bivariate ဆုတ်ယုတ်မှုတစ်ခုသို့မဟုတ်တစ်ခုတည်းသောဆုတ်ယုတ်မှုပုံစံတစ်မျိုးပြုလုပ်သည်ဖြစ်စေ၎င်းသည်ယေဘုယျ linear model ၏ version ဖြစ်သည်။ Pearson ဆက်နွယ်မှုကိုမြှင့်တင်ပေးသည့်အက္ခရာ r နှင့်စာလုံးသေးငယ်သည်။ ဆီလျှော်မှုအပေါ်ဘေးဖယ်ခြေရာခံရမကြပါစို့။
ငါလိင်စွဲလမ်းငြင်းခုံမှုမှာပါ ၀ င်မှုမရှိတဲ့အတွက်ဒီစွဲလမ်းမှုဆန့်ကျင်ရေးသုတေသနလေ့လာမှုကိုသာမရွေးချယ်ချင်ဘူး။ ငါနှင့်ချိတ်ဆက်ထားသည့်ဘလော့ဂ်တွင်ပြန်လည်ဆန်းစစ်ချက်များပါ ၀ င်သည်။ သူတို့ဘက်မှဘက်လိုက်မှုမရှိသည့်ပြန်လည်ဆန်းစစ်ချက်များပါရှိသည်။ သို့သော်ဘက်လိုက်မှုသည်ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိ၊ မဟုတ်သည်ကိုကျွန်ုပ်မစဉ်းစားလိုပါ။ ဒီစာအုပ်ကိုပြန်လည်သုံးသပ်သူတစ်ယောက်ကကျွန်တော့်ကိုဒီစာအုပ်ကိုမထုတ်ခင်သူ့ဝေဖန်မှုကိုကြည့်ဖို့တောင်းဆိုခဲ့တယ်၊ ဒါကြောင့်ငါကြည့်ပြီးအဲဒီမှာငါမှန်ကန်သောနှင့်မမှန်ကန်ကြောင်းထင်မြင်ချက်ကိုဖော်ပြခဲ့သည် သူကသူ၏ဝေဖန်မှုကိုပြန်လည်ပြင်ဆင်ရန်ကျွန်ုပ်၏အကြံပေးချက်အချို့ကိုလိုက်နာခဲ့သည်။ ဒါကြောင့်ဟုတ်တယ်၊ ပြန်လည်သုံးသပ်မှုမှာအမှားတွေရှိတယ်၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ငါ့ရဲ့အကြံပြုချက်အားလုံးကိုမလိုက်နာဘူး။ ငါဘလော့ဂ်အငြင်းပွားလျက်ရှိသည်သောပြforနာများအတွက်စတင်နေရာတစ်ခုမျှသာထောက်ပြသည်။ အကယ်၍ သင်သည်အရည်အသွေးမြင့်ဝေဖန်သုံးသပ်ချက်များ (စွဲလိုလားသူသို့မဟုတ်စွဲလမ်းမှုဆန့်ကျင်မှု) ကိုလင့်ခ်လုပ်နိုင်ပါကလိင်စွဲလမ်းမှုသဘောတရားကိုစိတ်ဝင်စားသောပရိသတ်များအတွက်ကောင်းမွန်သော ၀ န်ဆောင်မှုဖြစ်ပါလိမ့်မည်။
ငါပြောခဲ့သကဲ့သို့ငါအဓိကစိတ်ဝင်စားမှုမှာလိင်စွဲလမ်းမှုသဘောတရားထက်သိပ္ပံနည်းကျသုတေသနပြုခြင်းနှင့်အနက်ကိုအကျိုးသက်ရောက်စေသောစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအချက်များဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်သည်လိင်ဆိုင်ရာစွဲလမ်းမှုသဘောတရား၌စစ်မှန်သောယုံကြည်သူတစ် ဦး ၏တည်နေရာကိုညွှန်ပြရန်ပိုမိုလွယ်ကူကောင်းဖြစ်နိုင်သည်။ သုတေသန၏အကျိုးသက်ရောက်နိုင်သည့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအချက်များအားပရော်ဖက်ရှင်နယ်လိင်သုတေသီများကထိန်းသိမ်းထားသော ပို၍ တည်ငြိမ်သော၊ ဘက်မလိုက်သောဆိုရှယ်လစ်ကွန်ရက်စာမျက်နှာ (စွဲလမ်းမှုသို့မဟုတ်ဆန့်ကျင်မှုစွဲလမ်းမှု) ရှိပါက၎င်းသည်အမှန်ပင်ဘက်မလိုက်ခြင်းရှိမရှိကိုယ့်ကိုကိုယ်ကြည့်ရှုရန် URL ကိုကျွန်ုပ်နှစ်သက်ချင်ပါသည်။ လိင်စွဲလမ်းမှုကိုဘက်မလိုက်ဘဲဆွေးနွေးခြင်းသည်ကျွန်ုပ်အတွက်ပထမဆုံးဖြစ်သည်။
Jen အပေါ်အားဖြင့် Submitted နိုဝင်ဘာလ 4, 2013 - ညနေ ၂:၃၅
တကယ်ပါပဲ။ ရေးသားသူဖြစ်ကောင်းကြိုတင်ထုတ်ဝေဖို့, သင့်ရဲ့တုံ့ပြန်ချက်ပိုမိုသတိပြုပေးဆောင်ခဲ့ကြသင့်၏ကဲ့သို့ငါ့ကိုမှအသံ။
ဤနေရာတွင်အလွန်နာကျင်စွာသိသာသောအရာကိုထောက်ပြရန်မုန်းတီးပါက၊ အကယ်၍ ထုတ်ဝေခြင်းနှင့်ပတ်သက်သောအဓိကငြင်းခုံမှုသည်အကြောင်းအရာသာမဟုတ်ဘဲတရားဝင်မှုသည်သာလျှင်ပြproblemနာတစ်ခုရှိသည်ဟုစိတ်ချစွာပြောနိုင်သည်။
ကတင်ပြ ယောဟနျသအေဂျွန်ဆင် Ph.D ဘွဲ့ကို on နိုဝင်ဘာလ 5, 2013 - ၁၁း၁၄ နာရီ
ထိုပြဿနာကိုသိသာမပါလျှင်ဟုတ်ပါတယ်, ဒါကြောင့်ဖြစ်သင့်သည်။ ဤပြဿနာကိုဒီအထူးသဖြင့်ခေါင်းစဉ်မှသျောထူးခြားသောမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါဟာပညာရေးစိတ်ပညာပြံ့နှံ့ပြေး။
စိတ်ပညာရှင်များသည်ဝေဖန်စဉ်းစားတွေးခေါ်ခြင်းအတွက်လေ့ကျင့်သင်ကြားမှုများစွာရရှိသည်။ ဆိုလိုသည်မှာကျွန်ုပ်သည်သုတေသနလေ့လာမှုများတွင်အားနည်းချက်များကိုရှာဖွေခြင်းနှင့်ရလဒ်များ၏အခြားအဓိပ္ပာယ်ကောက်ယူကောက်ယူခြင်းများကိုဆိုလိုသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အများစုသည်ကျွန်ုပ်တို့၏အရေးပါသောလုပ်ဆောင်ချက်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အပြုသဘောဆောင်သော၊ ဖန်တီးမှုဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်မှု၏အာရုံစူးစိုက်မှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ စိတ်ပညာရှင်များသည်သူတို့ယုံကြည်ပြီးသားအကြောင်းအရာများကိုမထောက်ခံသည့်လေ့လာမှုနည်းစနစ်၏အားနည်းချက်များကိုအဆုံးမဲ့ရွေးချယ်လိမ့်မည်။ ဤသည်တစ်ခုလုံးအဖြစ်စိတ်ပညာ၏စည်းကမ်းနှင့်အတူပြaနာတစ်ခုအရိပ်အယောင်။ အဘယ်သူမျှမလေ့လာမှုလုံးဝနည်းစနစ်စုံလင်သည်စေ့စေ့စပ်စပ်ပြန်လည်သုံးသပ်ကြပြီထုတ်ဝေထုတ်ဝေသည်။ သင်မကြိုက်သည့်ကောက်ချက်များချသည့်လေ့လာမှုများမှအပြစ်အနာအဆာများကိုရှာဖွေခြင်းသည်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ထုတ်လုပ်သည့်အခြားရွေးချယ်စရာရှုထောင့်အတွက်သေချာမှုမရှိသောပံ့ပိုးမှုအားလေ့လာမှုတစ်ခုကိုဒီဇိုင်းဆွဲခြင်းနှင့်လုပ်ဆောင်ခြင်းသည်နောက်တစ်ခုဖြစ်သည်။
အမည်မသိအပေါ်အားဖြင့် Submitted နိုဝင်ဘာလ 6, 2013 - ညနေ ၂:၃၅
Eh, လမ်းကြောင်းလွဲမရပေမယ့် "ကျနော်တို့ဆုတ်ယုတ်ဆိုလိုတာကသေးငယ်တဲ့အက္ခရာ r နှင့် Pearson ဆက်စပ်မှုကိန်းအတိုကောက်" ကျိန်းသေမဟုတ်ပါဘူး။ Regression ကွဲပြားခြားနားဆက်စပ်မှုထက်အမှားတည်နေရာ။ ပြန်လည်သုံးသပ်လေ့လာမှုကိုမည်သူအမှန်တကယ်ဖတ်နေသည်ကိုအလွယ်တကူပြောနိုင်သည်။ အကယ်၍“ ဆက်နွယ်မှု” ဟုဆိုပါကသူတို့သည်စာရင်းအင်းကိုမည်ကဲ့သို့ပြုလုပ်သည်ကိုမသိပါ (သင်၏ link ရှိကောင်လေးသည်တူညီသောအမှားကိုပြုလုပ်ခဲ့သည်) ။ အဲဒီကောင်မလေးမနေပါနဲ့
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးသိပ္ပံနည်းကျဘလော့ဂ်ဂါတော်တော်များများကကျွန်တော်ရှာမတွေ့ခဲ့ဘူး၊ ဒါပေမယ့်သင်ရည်ညွှန်းနိုင်တဲ့ကောင်းတဲ့ပိုပြီးမျှတတဲ့ပြန်လည်သုံးသပ်မှုအချို့ရှိခဲ့သည်။
ကောင်လေးသည်အခြား PT ဘလော့ဂါများနှင့်ပညာရပ်ဆိုင်ရာစှဲ:
အဆိုပါ DSM သို့ hypersexuality ရဖို့ကြိုးစားနေအဓိကကောင်လေးမှ:
ပိုပြီးအညီအမျှဝေဖန်ဖို့သူတို့ရဲ့စွမ်းရည်များအတွက် Oregon အတွက်ကျပန်းအနှိပ်ကုထုံးသေချာတာပေါ့။ ဒါတွေအားလုံးကိုငါသဘောတူတယ်၊ ဟုတ်တယ်၊ ဒါပေမယ့်ဒါကအချက်ပဲ။ ၎င်းတို့သည်အနည်းဆုံးကောင်းကျိုးနှင့်ဆိုးကျိုးကိုမီးမောင်းထိုးပြသည်။ သို့သော်ကိုးကားထားသောဝေဖန်မှုသည်အမှန်တကယ်မှားသည် (ဥပမာ SNP စာရေးဆရာများသည် SDI စကေးတစ်ခုလုံးကိုစုဆောင်းဖော်ပြခဲ့သည်) ။ မူပိုင်ခွင့်မှားယွင်းသောသတင်းအချက်အလက်များကိုမြှင့်တင်ခြင်းသည်အမြဲတမ်းပိုကောင်းသည်။
ကတင်ပြ ယောဟနျသအေဂျွန်ဆင် Ph.D ဘွဲ့ကို on နိုဝင်ဘာလ 6, 2013 - ညနေ ၂:၃၅
ငါ့ကိုငါကတကယ်တော့ငါ့အ post ကိုရေးသားဖို့ကြိုတင်ဖတ်ပါခဲ့ဘူးသောလေ့လာမှု, ကနေကိုးကားကြပါစို့။ http://www.socioaffectiveneuroscipsychol.net/index.php/snp/article/view/20770/28995 မှ:
“ Pearson ရဲ့ဆက်စပ်မှုကို P300 ၀ င်းဒိုးမှာတိုင်းတာတဲ့ပျမ်းမျှလွှဲခွင်နှင့်ကိုယ်တိုင်အစီရင်ခံသောမေးခွန်းလွှာအချက်အလက်များအကြားတွက်ချက်ခဲ့ကြသည်။ အရေးပါမှုသို့ရောက်ရှိသည့်တစ်ခုတည်းသောဆက်စပ်မှုမှာ P300 ၀ င်းဒိုးတွင်ကြားနေမှုနှင့်သာယာမှု - လိင်ဆက်ဆံမှုအခြေအနေများအကြားမိတ်ဖက်အတိုင်းအတာနှင့်လိင်ဆက်ဆံလိုသောစိတ်ဆန္ဒကွာခြားမှုရမှတ်ဖြစ်သည် (r (52) = - 0.332, p = 0.016 ။ )
မှန်ပါသည်, သုတေသီများလည်းအချို့သောမျိုးစုံဆုတ်ယုတ်လေ့လာဆန်းစစ်ကောက်ယူ, သင်မူကား၎င်းတို့သည် Pearson ဆက်စပ်မှုကိန်းတွက်ချက်ကြောင်းအထက်ပါကိုးကားထံမှတွေ့မြင်နိုင်သည်။
ထို့အပြင်ငါဆုတ်ယုတ်ခြင်းနှင့်ဆက်စပ်မှုနှစ်ခုကွဲပြားခြားနားသောအရာတို့ကိုမဟုတျကွောငျးကိုထိန်းသိမ်းရန်။ ငါလူအချို့ကဆက်စပ်မှုကိန်း, r, x နှင့် y အကြား linear ကြားဆက်ဆံရေး၏အစွမ်းသတ္တိ၏အရေအတွက်အညွှန်းကိန်း "မျှသာ" ကြောင်းပြောသတိရမိ, Regression အကောင်းဆုံး - သငျ့လိုင်း၏စည်းကမ်းချက်များ၌ x သို့မဟုတ် y ဖြစ်စေခန့်မှန်းရန်ကိုရည်ညွှန်းသည် , y က '= bx + တစ် ဦး သို့မဟုတ် x ကို' = + တစ် ဦး အားဖြင့်ဖြစ်စေ။ ဒါပေမယ့် y ကို x ပေါ်မှာပြန်ထည့်မယ်ဆိုရင် slope,bအတွက်အကောင်းဆုံးတန်ဖိုးက r * Sy / Sx ။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိန်းဂဏန်းများ (ဥပမာ - Quinn McNemar) နှင့်ပတ်သက်သည့်မည်သည့်ဖတ်စာအုပ်ကိုမဆိုကောက်ယူပါ၊ ၎င်းနှင့်ဆက်စပ်မှုနှင့်ဆုတ်ယုတ်မှုအကြောင်းဆွေးနွေးခြင်းကိုဖတ်ပါ။
အပိုဆောင်းကိုးကားထည့်သွင်းမှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ငါ Peele ၏အနေအထားနှင့်ရင်းနှီးခဲ့သည် (Stanton Peele သည်ဤအကြောင်းအရာနှင့်စပ်လျဉ်း။ တရားဝင်ကျွမ်းကျင်သူဖြစ်သည်)၊ ကျွန်ုပ်သည် Rory Reid ၏အပိုင်းအစကိုဖတ်ခဲ့သော်လည်းဂျိမ်းစ်ကန်တာရာမဟုတ်ပါ။ (သူ၏အတွေးအခေါ်ကိုကျွန်ုပ်အကျွမ်းတဝင်လေးစားသော်လည်း) ဤအပိုဆောင်းကိုးကားသတင်းအချက်အလက်ပိုမိုလိုသောသူတို့အားဝန်ဆောင်မှုတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
"P300 မှာအခြေအနေလွှဲခွင်ကွဲပြားမှုများအကြားဆက်နွယ်မှုကိုတိုက်ရိုက်အကဲဖြတ်ရန်အဆင့်နှစ်ဆင့်အဆင့်ဆင့်အဆင့်ဆင့်တွက်ချက်ခြင်းကိုတွက်ချက်သည်။ "
ငါဟာမကြာခဏစာရင်းအင်းဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံတစ်ယောက်ပါ၊ အမှားအယွင်းများသည်ဆုတ်ယုတ်ခြင်းနှင့်ဆက်နွယ်မှုများအကြားခြားနားသည်။ အမှန်မှာ၊ သူတို့သည်“ ကွဲပြားသောအရာနှစ်ခု” ဖြစ်သည်။ သင်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဌာနတစ်ခုတွင်မြေကြီးပေါ်တွင်မည်သို့အလုပ်လုပ်သနည်း။ အနည်းဆုံးတော့ငါ့ကျောင်းသားတွေနဲ့ဝေးဝေးနေပါ။
ကတင်ပြ ယောဟနျသအေဂျွန်ဆင် Ph.D ဘွဲ့ကို on နိုဝင်ဘာလ 7, 2013 - ၁၁း၁၄ နာရီ
သုတေသီများ၏ဆန်းစစ်ချက်များအရအမျိုးမျိုးသောဆုတ်ယုတ်ခြင်းနှင့် Pearson ဆက်စပ်မှု၏တွက်ချက်မှုများပါ ၀ င်ကြောင်းကျွန်ုပ်ဝန်ခံသောအခါလေ့လာမှုမှ“ အဆင့်နှစ်ဆင့်အဆင့်ဆင့်အဆင့်ဆင့်တွက်ချက်ခြင်း” ကိုသင်ဘာကြောင့်ကိုးကားခဲ့သလဲဆိုတာမသေချာပါ။
ငါပြောသကဲ့သို့ "ဟုတ်ပါတယ်, သုတေသီများလည်းအများအပြားဆုတ်ယုတ်ဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်းလည်းကောက်ယူပေမယ့်သငျသညျသူတို့ Pearson ဆက်စပ်မှုကိန်းတွက်ချက်သောအထက်ပါကိုးကားထံမှတွေ့နိုင်ပါသည်။ "
ငါကိုးကားဆွဲထုတ်သောအကြောင်းပြချက် "Pearson ရဲ့ဆက်စပ်မှုတွက်ချက်ခဲ့ကြသည်။ ။ ။ ငါနှင့်ဝေဖန်သူများကလေ့လာမှုကိုမဖတ်ဟုသင်ဆိုလိုသောကြောင့်ဖြစ်သည် သင်ပြန်လည်လေ့လာမှုကိုမည်သူအမှန်တကယ်ဖတ်သည်ကိုအလွယ်တကူပြောနိုင်သည်။ အကယ်၍ သူတို့က 'ဆက်စပ်မှု' ဟုဆိုလျှင်၎င်းတို့သည်စာရင်းအင်းပြုသည်ကိုမသိပါ။
သငျသညျဆုတ်ယုတ်ခြင်းနှင့်ဆက်စပ်မှုနှစ်ခုကွဲပြားခြားနားသောအမှုအရာဖြစ်ကြောင်းကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့လိုခငျြလြှငျငါ့ဧည့်သည်ဖြစ်လိမ့်မည်။ ငါသည်သင်တို့ကိုအမည်မသိကြောင့်သင့်ရဲ့ကျောင်းသားများကိုနေသောအဘယ်သူမျှမစိတ်ကူးရှိသည်။ ငါလုပ်ခဲ့တယ်ရင်တောင်သူတို့ကိုငါနှောင့်အယှက်မဟုတ်ဘူး။ ကျွန်မစိတ်ပညာရှင်သကဲ့သို့ငါ၏အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရှက်မဟုတ်ဖြစ်၏ ငါသင်သည်သင်၏အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းကျေနပ်စရာရှာတွေ့မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။